January 2010 | အရှင်ဇ၀န
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာမှ ဒါယကာကြီး ဦးရန်ပ (အိန္ဒိ ယနိုင်ငံမှ မဟတ္တမဂန္ဓီ၏ ဘိုးအေ) မောင်ရဲမြင့်တို့နှင့် တောင်လုံးလှ တောင်သို့ သွားရာလမ်း၌ အမှတ်တရ။ မှတ်ချက်=ကင်မရာကြောင့် သင်္ကန်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပါသည်။
မိမိသည် သီရီလင်္ကာ၌ ပညာသင်ကြားခဲ့စဉ်က ကိုးရီယားဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနှင့် ကျောင်းအတူတကွတက်ရင်း ရင်းနှီးခဲ့သည်။ ရှေးရေ စက်ကြောင့်ပင် ဖြစ်မည်ထင်ပါသည်။ ထိုကိုးရီးယား ဘုန်းတော်ကြီး နှင့်ပင် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ပုနေးမြို့ ပုနေးတက္ကသိုလ်၌ပင် လာရောက်ဆုံကြုံကြပြန်သည်။ "Ph।D"ဘွဲ့ကို အတူ ပြုလုပ်ကြရ ပြန်သည်။ ထိုပုနေးမြို့ မှာနေစဉ် မိမိတို့သည် မကြာခဏ မြို့ထဲသို့ အတူတကွ ဈေးဝယ်သွား လေ့ရှိသည်။ တစ်နေ့ မိမိနှင့် ထိုကိုးရီးယားဘုန်းကြီး, သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးဥတ္တမ(oke) တို့သည် ဈေးဝယ်ရန်အတွက် ပုနေးမြို့အတွင်းက (super market) ကြီးတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ထို့သို့ရောက်သွား သောအခါ ကိုးရီးယားဘုန်းတော်ကြီးက
"တွန်းလှည်း, တွန်းလှည်း," ဟုပြောဆိုကာ ရှေ့က ဦးတည်သွားလေသည်။ မိမိနှင့် ဦးဥတ္တမတို့သည် ထိုစူပါမား ကက်တွင်ရှိသော ပစ္စည်းများတင်ရန်အလို့ငှာ ထားရှိသော တွန်းလှည်းတစ်စီးကို ယူ၍ တွန်းကာ နောက်က လိုက်သွားလေသည်။ မိမိသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဦးဥတ္တမကို
"ဟ မောင်ဥတ္တမ ကိုးရီးယားကြီးက မြန်မာစကားတတ်သားဘဲနော်၊ မြန်မာလို တွန်းလှည်းကိုတောင်သိတယ် နော်" ဟု ချီးကျူးမိလိုက်သေးသည်။ သို့သော် ကိုးရီးယားဘုန်းကြီးသည် အမျိုးသားများတက်ရာ အ်ိမ်သာသို့ ရှေးရှုသွားနေလေသည်။ မိမိတို့သည်လည်း လွဲတော့ လွဲနေပြီးဟု သိရှိလိုက်သည်။ ဘေးတွင် ထိုင်ကာ အအေးသောက်နေကြသော ကုလားစုံတွဲလေးများကလည်း
"ဒီဘုန်းကြီးတွေ ပစ္စည်းတင်တဲ့ တွန်းလှည်းကြီးတွန်းကာ အိမ်သာဘက်ကို ဘာများသွားလုပ်မလို့လဲ မသိ"ဟု မိမိ တို့ကို ကြည့်ကာ ပြုံးနေကြသည်။ မိမိတို့သည်လည်း အနည်းငယ် ရှက်လာမိသည်။ အိမ်သာသို့ ရောက်သောအခါ ကိုးရီးယားဘုန်းတော်ကြီးက
"ဒီတွန်းလှည်းကို ဘာကြောင့် ယူလာသလဲ"ဟု မေးလေသည်။ ထိုအခါမှ မိမိတို့ မှားမှန်းသိလိုက်ကြသည်။ ကိုးရီးယားဘုန်းတော်ကြီးသည် သူသည် အိမ်သာသွားမည်ကို
"I am going to toilet ငါအိမ်သာသွားမယ်လို့ ၀ါကျအပြည့်ပြောမည့်အစား 'toilet' လို့ အတိုပြောသွားသည်။ သို့သော် 'ထွိုင်းလက်'လို့ အသံထွက်ရမည့်အစား သူက 'တွန်းလှည်း'လို့ အသံထွက်ပြောသောအခါ မိမိတို့သည် တွန်းလှည်းကြီးကို အိမ်သာသို့ တွန်းသွားသည်ကို မှားသည်ဟု ဘယ်သူမှ ပြောမည်မထင်ပေ။ ထိုအကြောင်းကို စကားစပ်မိ၍ မိမိသူငယ်ချင်းများကို ပြောပြရာ မိမိသူငယ်ချင်းများက ထိုကိုးရီးယားဘုန်းတော်ကြီးသည် မိမိထံ သို့ အလည်ကြွလာတိုင်း
"ဦးဇ၀နရေ ကိုယ်တော့ toilet='တွန်းလှည်း'ကြီးကြွလာပြီဟု စကြ နောက်ကြလေတော့သည်။
Posted by AShin Javana at 11:51 PM0comments
The Doctrine of Paticcasamuppada (Part 1)
Paticcasamuppada is Pali language,acombination of 'Paticca, Sam, and Uppada, 'Paticca' because of, 'Sam' well, and 'Uppada' arising of effect because of cause.
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒဟူသည် ပဋိစ္စ, သမ်, ဥပ္ပါဒဟူသော စကားများကို ပေါင်းစပ်ထားသော ပါဠိသာသာဖြစ်သည်။ ပဋိစ္စဆိုသည် စွဲ၍ သို့မဟုတ် ကြောင့် ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။ သမ်ဟူသည် ကောင်းစွာဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ ဥပ္ပါဒဟူသည် အကြောင်းကြောင့် အကျိုးဖြစ်သည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။
Therefore Paticcasamuppada means there arises effect because of cause well.
ထို့ကြောင့် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဟူသည် အကြောင်းကြောင့် အကျိုး၏ ကောင်းစွာ ဖြစ်ပေါ်မှုဟု ဆိုလိုပါသည်။
According to the Late Venerable Moe Gok Sayadaw's view, Paticcasamuppada means the arising and disappearing of the five aggregates, such as Rupakkhandha, Vedanakkhandha, Sannakkhandah, Samkharakkhandha and Vinnanakkhandha or the arising and passing away of Rupa (matter) and Nama (mind).
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ အလိုအရ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဆိုသည်မှာ ရူပက္ခန္ဓာ,ဝေဒနက္ခန္ဓာ,သညာက္ခန္ဓာ, သင်္ခါရက္ခန္ဓာ ၀ိညာဏက္ခန္ဓာဟူသော ခန္ဓာငါးပါး၏ ဖြစ်မှု ပျက်မှု တစ်နည်းအားဖြင့်သော်ကား ရုပ်နာမ်နှစ်ပါး၏ ဖြစ်မှု ပျက်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
Here, if we trance where, when the Buddha paid attention Paticcasamuppada (cause and effect) in direct and reverse order, we will come to know it very well.
ဤနေ၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ပဋိစ္စသမုပါဒ်တရားတော်ကို အနုလောမ ပဋိလောမအားဖြင့် ဘယ်နေရာ ဘယ်အချိန်က ဆင်ခြင်ခဲ့သည်ဆိုသည်ကို နောက်ကြောင်းပြန်လိုက်ရသော် ကျွန်တော်တို့ ကောင်းမွန်စွာ သိရှိလာပါလိမ့်မည်။
On one occasion, the Buddha was staying at Uruvera in the bank of the river Neranjara at the foot of the Tree Awakening ( Mahabodhirukkha).
အခါတစ်ပါး မြတ်စွာဘုရားသည် ဥရုဝေလတောအုပ် နေရဉ္ဖရာဖြစ်ကမ်းအနီး မဟာဗောဓိပင်၇င်း၌ သီတင်းသုံး ထိုင်နေတော်မူပါသည်။
Then, the Buddha sat cross-legged in one posture for seven days at the foot of the Tree Awakening experiencing the bliss of freedom.
ထို့နောက် မြတ်စွာဘုရားသည် နိဗ္ဗာန်၏ ချမ်းသာကို ခံစားရင် မဟာဗောဓိပင်ရင်းဝယ် ရ ရက်ကြာ တစ်ထိုင်တည်း တင်ပလ္လင်ခွေကာ ထိုင်နေတော်မူခဲ့ပါသည်။ (To be continued ဆက်ရန်)
Posted by AShin Javana at 5:18 AM0comments
ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်လုံးလှတောင်ရိုးက ထိန်၌ နယ်မြေနယ်ခံဆရာတော်များနှင့် အမှတ်တရ
ကျောက်ပန်းတောင်းနယ်မှ ဆရာတော်တစ်ပါးသည် သူ၏ တပည့်ရှိရာ မြစ်သားမြို့နယ် ကုက္ကိုစုရွာ ကုက္ကိုစုရွာဦး ကျောင်းသို့ အလည်အပတ် ကြွချီလာလေသည်။ ဆရာတော်သည် ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် သူ၏ တပည့်ကျောင်း၌ စိတ်ရှိသလောက်နေထိုင် သီတင်းသုံးသွားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားလေသည်။ ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်သော တပည့်ဖြစ်သူ ဆရာတော်ဦးနန္ဒသာမိသည်လည်း ဆရာတော်ကို ရိုသေ စွာ ပြုစုလုပ်ကျွေး နေလေသည်။ ရွာမှ ဒကာ ဒကာမအပေါင်း တို့ကလည်း ဆရာတော်ကို ကောင်းပေ့ဆိုသော ဆွမ်း+ဆွမ်းဟင်းများ ဖြင့် ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြလေသည်။ တစ်နေ့ ကျောင်းတွင် ဝေယျာဝစ္စ လုပ်ဆောင်နေသော ကိုအောင်မြင့်သည် ဆရာတော်ကြီးကို ပဲပလာတာ လာရောက်ကပ်လှူလေသည်။ ဆရာတော်ကြီးသည် အလွန်အင်မတန်ကောင်း သောကြောင့် ထိုပလာတာကို တော်တော်လေး ဘုဉ်းပေးလေသည်။ ဘုဉ်းပေးပြီးနောက်
"ဒကာအောင်မြင့်ရဲ့ ဒါကို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ "ဟု မေးလေသည်။ ထိုအခါ ကိုအောင်မြင်က
"ဘုန်းဘုန်း အဲဒါ ပလာတာလို့ခေါ်ပါတယ်ဘုရား"ဟု လျှောက်လေသည်။ ဆရာတော်သည်လည်း အလွန်အင်မ တန်ကောင်းသော ထိုပလာတာကို မှတ်သွားလေသည်။ ထို့နောက် မကြာမီ ဆရာတော်သည် သူ၏ ရွာသို့ ပြန်ကြွသွားလေသည်။ ရွာရောက်ပြီနောက် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်ကြာသောအခါ ဆရာတော်သည် ကျန်းမာရေးမ ကောင်းဖြစ်လေသည်။ ရွာမှ ဒကာ ဒကာမတို့သည်လည်း ဆရာတော်ကို ကျန်းမာရေးပြန်လည် ကောင်းမွန်လာ အောင် တော်တော်လေး ဆေးကုလိုက်ကြရသည်။ကျန်းမာရေးကောင်းစတွင် ဒကာ ဒကာမများက
"ဆရာတော်! ဘာဘုဉ်းပေးချင်သလဲဘုရား၊ တပည့်တော်တို့ ဆရာတော်ဘုဉ်းပေးချင်တာကို ကပ်ပါမယ်ဘုရား၊" ဟု လျှောက်ထားလေသည်။ ဤတွင် ဆရာတော်က
"အေး ငါ ကုက္ကိုစုကြွတုန်းက မောင်အောင်မြင့်က ပလာစတာကပ်လိုက်တာ တော်တော်လေးဘုဉ်းပေးလို့ ကောင်းတယ်ကွ၊ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ငါ့ကို ပလာစတာဝယ်ကပ်ကြစမ်းကွာ"ဟု မိန့်ကြားလိုက်လေတော့သ တည်း။ "အော် တော်တော်လေး ဘုဉ်းပေးလို့ ကောင်းမယ့် ပလာစတာပါပေတည်း။"
Posted by AShin Javana at 4:22 AM0comments
(ဤပုံပြင်ကို ပြောပြသော ဒါယကာကြီးဦးရန်ပနှင့်အတူ)
မိမိသည် သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ကထိန်ပင့်သဖြင့် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာ တောင်ဦးကျောင်းသို့ ရောက်ရှိသွားခဲ့သည်။ ထိုရွာမှ ဒါယကာတော်များနှင့် အလွန်ပင် စကားလက်ဆုံကျခဲ့သည်။ အထူးအားဖြင့် ဒါယကာကြီးဦးရန်ပနှင့် စကားလက်ဆုံ အတော်ပင်ကျခဲ့သည်။ အကြောင်းသော်ကား မိမိသည် အင်တာနက်တွင် ဟာသပုံပြင်များရေးနေကြောင်း ဒကာကြီးဦးရန်ပသိရှိသွားသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူကြားဖူးထားသော ပုံပြင်များကို ပြောပြနေသောကြောင့်ပေတည်း။ ကထိန်ပွဲကြီးနေက ဖြစ်သည်။ မိမိသည် ထိုဒါယကာကြီးနှင့် ဦးရန်ပနှင့် အတူထိုင်ပြီး စကားပြောနေလေသည်။ ထိုစဉ် အသက်ခြောက်ဆယ်ခန့်လောက်ရှိသော ဆရာတော်တစ်ပါးသည် ကထိန်ပွဲသို့ ကြွရောက်လာသည်။ ထိုဆရာတော်ကြွလာသည်ကို မြင်သောအခါ ဒကာကြီးဦးရန်ပသည် အောက်ပါအတိုင်း လက်ထောက်ဦးဇင်းအား လျှောက်ထားလေသည်။
လက်ထောက်ဦးဇင်းသည်လည်း ထိုဆရာတော်ကို နေရာများခင်းကျင်းပေးကာ စကားပြောနေလေသည်။ ထိုအခါက မိမိက
"ဒကာကြီးဦးရန်ပ! ခုနက ဒကာကြီးက ကြွလာတဲ့ အာဂန္တုကို ခြောက်ပုလင်းကိုယ်တော်လို့ ပြောလိုက်တယ်၊ အဲဒါဘာကြောင့်လဲ"။ ဟု မေးသောအခါ ဒကာကြီးက အောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြလေသည်။
"ဦးဇင်းရေ အကြောင်းကတော့ ဒီလိုပါ၊ အဲဒီဆရာတော်က ကြီးမှ ရဟန်းဝတ်လာတယ်၊ ခုတော့ တပည့်တော်တို့ နယ်ထဲက တောကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ ကျောင်းထိုင်နေပါတယ်၊ ရွာထဲက ဒကာ ဒကာမတွေက သူ့ကို ကြည်ညိုကြတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆို တောထဲမှာ တစ်ပါးတည်း တရားအားထုတ်နေတယ်ပေါ့၊ ကြည်ညိုမှုပေါ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး လာသမျှ ဒကာ ဒကာမတွေကိုလဲ အလှူခံတာ ရက်ရက်စက်စက်ဘဲ၊ တခါတလေ အိမ်ကြွပြီတောင် အလှူခံတယ်၊ အလှူခံတာများလာတော့ သူဆီကို သွားတဲ့ (ဒကာတွေလန်)ထွက်ကုန်တယ်၊ အဲဒီအချိန်က စပြီ သူကို ခြောက်ပုလင်းကိုယ်တော်လို့ အမည်ပေးတော့တာပါဘဲဘုရား။"
"ဟ ဒကာကြီးရ! ဒကာတွေလန်တာနဲ့ ခြောက်ပုလင်းကိုယ်တော်နဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲ ဒကာကြီးရ"ဟု ပြောသောအခါ
ဆီတစ်ဂါလန်ကို ပုလင်းနဲ့တွက်ရင် ဘယ်နှစ်ပုလင်းရှိလဲ ကိုယ်တော်"ဟု ဒကာကြီးရန်ပက မိမိကို မေးလေသည်။မိမိက
"ဒကာကြီးကလဲ ဆီတစ်ဂါလံဟာ ခြောက်ပုလင်းရှိတာပေါ့၊" ဖြေကြားလိုက်လေသည်။ ဤတွင် ဒကာကြီဦးရန်ပက
တစ်ဂါလန်ဟာ ခြောက်ပုလင်းရှိတယ်လေ။ ဒါကြောင့် အဲဒီကိုယ်တော်ကို ဒကာလန်(တစ်ဂါလံ) ခြောက်ပုလင်းကိုယ်တော်လို့ ခေါ်တာပေါ့ အရှင်ဘုရားရဲ့"ဟု ပီပြင်စွာ ရှင်းပြလေတော့သည်။ `ဤတွင်မှ မိမိသည်လည်း ထိုတောရဆရာတော်ကို ခြောက်ပုလင်းကိုယ်တော်ဟု ခေါ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းကို သဘောပေါက်လေတော့သည်။"အော် အားကျဘို့ ကောင်းလိုက်တာ ငွေမကုန်ဘဲ ရလိုက်တဲ့ နာမည်ပါလား"
(ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာ တောင်လုံးလှတောင်၌ အမှတ်တရ)
ယနေ့မှစ၍ ဟာသပုံပြင်များနှင့်အတူ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၀ိပဿနာနည်းကို မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်နှစ်ဘာသာတို့ဖြင့် ရေးသားပေအံ့။
The late Venerable Moe Gok Sayadaw always admonishes his disciples that before you practice meditation, all of you should understand the meaning of Paticcasamuppada, cause and effect.
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည် အမြဲတမ်းသူ၏ တပည့်သားများကို ဆုံးမလေ့ရှိသည်။ သင်တို့အားလုံး တရားအားမထုတ်မီ အကြောင်း အကျိုး ဖြစ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နားလည်းအောင်အား ထုတ်သင့် တယ်။
If you understand the meaning of Paticcasamuppada, cause and effect properly, your meditation will be powerful and can get Magga (path) and Phala easily.
အကယ်၍ အကြောင်းအကျိုးဖြစ်တဲ့ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကို သင်လျှော်စွာ နားလည်းလျှင် သင်တို့ရဲ့ကမ္မဌာန်းအားထုတ်မှုသည် ဗလ၀၀ိဿနာ ဖြစ်ပြီး မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ်ကို လွယ်ကူစွာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
I will therefore mention the meaning of Paticcasamuppada, cause and effect before I put an explanation the late Venerable Moe Gok Sayadaw’s meditation method firstly.
ထို့ကြောင့် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ တရားထိုင်နည်းစနစ်ကို မပြမီ အကြောင်း အကျိုး ဖြစ်သော ပဋိစ္စ္စသမုပ္ပါဒ်တရား၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ရှေးဦးစွာပြပေအံ့။(ဆက်ရန်-To continue)
Posted by AShin Javana at 8:48 AM0comments
မိမိတို့၏ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်သည် သူ၏တပည့်များကို ပညာတတ်များဖြစ်စေချင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ဆရာတော်သည် သူ၏ တပည့်တော်ကျော် ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စကို ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှ စာချရာတွင် နာမည်ကျော်ကြားသော ခေမာသီဝံစာသင်တိုက်သို့ ကိုယ်တိုင်ပင် သွားပို့လိုက်လေသည်။ ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စကို ပို့ခဲ့ပြီးနောက် ဆရာတော်သည်
“ငါကောင်ကြီးတော့ ပညာတတ်ကြီးဖြစ်လာတော့မှာဘဲ”ဟု တွေးတောရင်း ပီတိအပြည့်ဖြင့် ပြန်ကြွလာခဲ့လေသည်။ ဆရာတော်သည် ရွာအပြန်တွင် ရွာကို အရင်ပြန်ကြွတော်မမူဘဲ မိတ္ထီလာမြို့သို့ ခေတ္တခဏ လိုအပ်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူလလေသည်။ ထို့နောက် ရွာသို့ ပြန်ကြွလာခဲ့လေသည်။ ဆရာတော်သည် ရွာရောက်လျှင်ရောက်ချင်းဘဲ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ကို စာသင်ရန်ပို့လိုက်သော ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စသည်ကား ရွာကျောင်းကို ဆရာတော်ရှေ့မှ ပြန်ရောက်နေလေသည်။ ဆရာတော်သည် ခရီးရောက်မဆိုက်ဘဲ သူ၏ပစ္စည်းများကိုပင် မချနိုင်တော့ဘဲ
“အော် မင်းက ငါ့အရင်တောင် ရွာကို ပြန်ရောက်နေတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့ပြန်လာတာလဲ”
“တပည့်တော်ဆရာတော်နဲ့ ရွာကို လွမ်းလို့ပါဘုရား”ဟုလျှောက်ထားလိုက်ရာ ရိုက်ရန်အလို့ငှာ ဟန်ပြင်လိုက်သော ဆရာတော်သည် “အလျှောက်ကောင်းတော့ အထောင်းသက်သာ”ဟူသော ဆိုရိုးစကားအတိုင်း ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စသည် အထောင်းသက်သာသွားလေတော့သည်။
တစ်နေ့ မိမိ၏ ဒါယကာကြီးသည် ဆရာတော်နှင့် အလ္လာပသလ္လာပစကားပြောရာ ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စ၏ စာသင်တိုက်မှ ထွက်ပြေးလာခြင်းအကြောင်းသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။
“ဒီကောင်တော်တော်ဆိုတဲ့ အကောင် စာသင်တိုက်ကို ပို့တာ ကျုပ်က မရောက်သေးဘူး၊သူက ကျုပ်အရင် ပြန်ရောက်နေတယ် ဒကာကြီးရာ”ဟု ငြီးညူပြောကြားလေတော့သည်။
ဤတွင် မိမိ၏ ဒါယကာကြီးမှ
“ဒါဆိုရင် အရှင်ဘုရားတပည့်က အင်ရောင်မျောက်လို ဖြစ်နေပြီပေါ့” ဟု လျှောက်ထားလေသည်။ ထိုနောက် ဆရာတော်က
“ဒကာကြီးရဲ့ အင်ရောင်းမျောက်ကဘယ်လိုလဲ ပြောစမ်းပါအုံး” ဟု တောင်းဆိုလာသည်။
ဤတွင် မိမိ၏ ဒါယကာကြီးမှ အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြလေသည်။ “ဆရာတော်! ကျောက်ဆည်မြို့နယ်အတွင်း အင်ရောင်းရွာ အင်းရောင်းရွာဦးကျောင်းမှာ ဆရာတော်က မျောက်တစ်ကောင်မွေးထားတယ်။အဲဒီမျောက်ဟာ အလွန်ဆိုးသွမ်းတယ်။ ကျောင်းကို လာရောက်ကြတဲ့ ဒါယကာ ဒါယကာမတွေကို ကုတ်တယ်၊ ဖဲ့တယ်၊ ပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ကို တက်စီးတယ်၊ တက်ခွတယ်၊ ကြာတော့ ဒကာ ဒကာမတွေက
‘ဆရာတော်ရဲ့ မျောက်ကြီးရှိနေရင်တော့ ဆရာတော်ဆွမ်းငပ်လိမ့်မယ်၊ တော့ထဲပို့လိုက်ပါ ဆရာတော်၊’ လျှောက်ထားကြတယ်။ ဆရာတော်လဲ မျောက်ကြီးကို ချစ်သော်လဲ မိမိဆွမ်းငပ်မယ့်ဘေးကို မြင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာတော်ဟာ ထိုမျောက်ကြီးကို တောထဲကို ပို့လိုက်လေသည်။ ပို့တဲ့ဆရာတော်က ကျောင်းမရောက်သေးဘူး ဘုရား၊ အဲဒီ မျောက်ကြီးက ကျောင်းပြန်ရောက်နေတယ်ဘုရား”ဟု ရှင်းပြလေသည်။ ဤတွင် ဆရာတော်က
“အင်း ကျုပ်ကောင်လဲ အင်ရောင်းမျောက်လိုဖြစ်နေပါပြီ” ဟု မိန့်ကြားလိုက်လေသည်။ ဆရာတော်သည် ထို့နေမှ စ၍ ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စကို “အင်ရောင်းမျောက်” လို့ ခေါ်လေတော့သည်။ ဆရာတော်က ခေါ်သည်ကို အစွဲပြု၍ ကျောင်းမှ ကိုရင် ကျောင်းသားများကလဲ ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စကို “အင်ရောင်းမျောက်ကြီး”ဟု၍ ခေါ်ဝေါ်လေတော့သတည်း။
“အော် ကိုရင်ပဏ္ဍိစ္စ တော်တော်ကံကောင်းတာပဲ၊ သူများတွေက နာမည်တစ်ခု ရဘို့အရေး ငွေကုန်းကြေးကျခံပြီး ရယူကြရတယ်၊ သူ့မှာတော့ ဘာငွေမှ မကုန်ဘဲ နာမည်တစ်လုံးကို ကောင်းကောင်းရလိုယ်တယ်။”ဟူ၍ပင် မိမိ ချီးကျူးမိပါတော့သည်။
Posted by AShin Javana at 3:02 AM0comments
“ဓမ္မကထိကအကျော်ဆရာတော်ဦးညေယျနှင့် ဆိုင်းဆရာကြီး စိန်ဗေဒါ”
အကျွန်ုပ်တို့၏ မြစ်သားနယ်တွင် အလွန်အင်မတန်မှ နာမည်ကြီးသော ဓမ္မကထိကအကျော်ဆရာတော်တစ်ပါးရှိလေသည်။ အလှူပွဲရှိတိုင်း ထိုဆရာတော်ပင် တရားဟောရလေသည်။ ထိုဆရာတော်သည် တရားဟောအလွန်ကောင်းသည်။ သို့သော် ထိုဆရာတော်သည် တရားဟောလျှင်ကား အလွန်ပင် ရှည်တော်မူပါပေ၏၊ တစ်နှစ် မြစ်သားနယ်၊ ရွာတစ်ရွာတွင် အလှူပွဲတစ်ပွဲကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာ ကျင်းပလေသည်။ ထိုအလှူရှင်များသည် အလွန်အင်မတန်မှ ချမ်းသာကြသည်။ သို့ဖြစ်၍ သူတို့သည် ဓမ္မကထိကများတွင် အကျော်အမော်ဆရာတော်ဦးညေယျကို ပင့်သည်။ ဆိုင်းမှာတော့ ထိုခေတ်က နာမည်ကြီး ဆရာကြီးစိန်ဗေဒါကို ငှားကို လေသည်။ ဆရာတော်ဦးညေယျသည် အလှူပွဲရေစက်ချသောနေ့တွင် တရားဟော ရေစက်ချပေးရသည်။ ဆရာတော်သည် တရားဟောရာတွင် အလှူရှင်များသဒ္ဓါတရားဖြစ်စေရန်အလို့ငှာ လှူဖွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီ၏ အကျိုးများကို ထုတ်ဖေါ်ဟောပြလေ့ရှိသည်။ ယနေ့အလှူပွဲတွင် အလှူရှင်များသည် ချမ်းသာသော ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်အားလျှော်စွာ လှူဖွယ်ပစ္စည်းများက များလှပေသည်။ ဆရာတော်သည် ထိုလှူဖွယ်ပစ္စည်းများ၏ တစ်ခုခြင်းစီ၏ အကျိုးများကို ထုတ်ဖေါ်၍ ဟောကြားလေသည်။ ဟောဟန်ကား
(၃) ကိုယ်ရောင် ကိုယ်ဝါတောက်ပခြင်း၊
(၄)ခန္ဓာကိုယ်မှ အပူကင်းခြင်း၊” စသည်ဖြင့် သင်္ကန်း၏ အကျိူးဆယ်ပါးကို ကုန်အောင်ဟောသည်။ ထို့နောက် လှူဖွယ်ဝတ္ထုတွေတွင် ပန်းများလည်း လှူဒါန်းထားရာ
(၅) ကိုယ်စိတ်ရွှင်လန်းခြင်းတို့ပေတည်း။ စသည်ဖြင့် လှူဖွယ်ပစ္စည်း ရှိသမျှတို့၏ အကျိုးတို့ကို ဟောလာရာ နေ၀င်လုနီးပါးဖြစ်လာလေသည်။ နောက်ထပ်ပွဲကူးရန်ရှိသော စိန်ဗေဒါကြီးသည် တစ်ဖက်က အလှူပွဲသို့ နောက်ကျမှာကိုလဲ စိုးရိမ်လာသည်။ သို့ဖြစ်၍ စိန်ဗေဒါကြီးသည် ဆရာတော်ဦးညေယျကို တရားဟောမှုအဆုံးသတ်ရန်အလို့ငှာ
“ဗေထိ ဗေထိ ဗေထိ”ဟု ပန်းမကြီးကို တီးကာ အချက်ပြလေတော့သည်။ သို့သော် ဆရာတော်သည် တရားကို မရပ်ဘဲ
“ဗေထိ အသာနေ, ဗေထိ အသာနေ, ဆွမ်းအကျိုးငါးပါးဟူသည်ကား
(၂)အဆင်းလှခြင်း၊ စသည်ဖြင့် ဆွမ်းအကျိုးငါးပါးနှင့်တကွ အခြားလှူဖွယ်ပစ္စည်းများ၏ အကျိုးများကိုပါ ဆက်ဟောပြန်လေရာ မိုးချုပ်သွားလေတော့သည်။ စိန်ဗေဒါကြီးသည် ဆရာတော်၏ တရားပွဲအပြီး နောက်ရွာမှ အလှူပွဲကို ဆက်ကူးရာ အလွန်ပင် နောက်ကျသွားသည်။ စိန်ဗေဒါကြီးလဲ ပွဲနောက်ကျသွားသဖြင့် နောက်တစ်ရွာမှ အလှူရှင်များနှင့် ပြဿနာကို အတော်ရှင်းယူရသည်။ ငွေကိုတော့ စာချုပ်အတိုင်း အပြည့်မရတော့ပေ။
နောက်တစ်လ ထိုရွာမှပင် အလှူပွဲရှိသဖြင့် စ်ိန်ဗေဒါကြီးကို သွားရောက်ငှားရမ်းလေရာ
စိန်ဗေဒါကြီးသည်ကား အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားလိုက်လေတော့သည်။
“ခင်ဗျားတို့ အလှူမှာ တရားဟော ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ဦးညေယျဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ပါ၊”
“အော် နာမည်ကျော် ဆိုင်းဆရာကြီးစိန်ဗေဒါသည်ပင် ကြောက်ရလောက်အောင် ကောင်းတဲ့ ဓမ္မကထိကအကျော် ဆရာတော်ဦးညေယျပါလား၊” ဟူ၍ပင် ဖြစ်လေတော့သတည်း။
(Older post နှိပ်ပါ ပုံပြင်များစွာကို တွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်)
Posted by AShin Javana at 2:37 AM0comments
“ခါးနာရောဂါ စတင်စွဲကပ်လာခြင်း၏ အကြောင်း”
သာလွန်ဆရာတော်သည် မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးဖြင့် ကုသပေးရာတွင် ကျော်ကြားသော ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်သည်။ အနီးအနားမှ ရောဂါသည်များ ထိုဆရာတော်ထံသို့ သွားရောက်၍ အကုသခံယူကြသည်။ ကူမဲမြို့မှ ဒါယိကာမတစ်ဦးသည် ခါးနာရောဂါစွဲကပ်လာသဖြင့် သာလွန်ဆရာတော်ထံရောက်ရှိသွားသည်။ ထိုဒါယိကာမကြီးသည် ဆရာတော်ကို ဦးတိုက်လေသည်။ ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ဒါယိကာမကြီးကို အောက်ပါအတိုင်း မေးမြန်းလေသည်။
“ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ ဒကာမကြီး”ဟု မေးမြန်းလေသည်။ ထိုအခါ ဒါယိကာမကြီးက
“တပည့်တော် ခါးနာရောဂါဖြစ်နေလို့ပါဘုရား၊ ဆရာတော်တတ်စွမ်းသလောက်ကုသပေးပါအုံးဘုရား၊” လျှောက်ထားလေသည်။ ဤတွင် ဆရာတော်က
“ဘယ်အချိန်ကစပြီး ခါးနာရောဂါစွဲကပ်လာပါသလဲ ဒကာမကြီး၊” ဟု မေးမြန်းလေသည်။ ထိုအခါ ဒါယိကာမကြီးက
“တပည့်တော်ရဲ့ ခါးနာရောဂါဝေဒနာဟာ ကုက္ကိုစုဆရာတော်ရဲ့ဝါတွင်းဥပုသ်သီလတရားကို နာပြီးနောက် စတင်စွဲကပ်လာတာပါဘဲဘုရား၊”ဟု လျှောက်ထားလေသည်။ ထို့နောက် ဆရာတော်သည် ဒါယိကာမကြီးအား သင့်တော်သော ဆေးဝါးများကို ပေးလိုက်လေသည်။ များမကြာမီ သာလွန်ဆရာတော်သည် ကုက္ကိုစုဘုန်းကြီးနှင့်တွေ့ သောအခါ ထိုအကြောင်းကို ပြောပြလေသည်။ ထို့နောက် သာလွန်ဆရာတော်သည်
“အရှင်ဘုရားရဲ့တရားနာပြီး ခါးနာသွားတယ်ဆိုရလောက်အောင် အရှင်ဘုရားက ဘယ်လောက်တောင်ကြာအောင်တ၇ားကို ဟောပစ်သလဲကိုယ်တော်”ဟု မေးလေသည်။
ကုက္ကိုစုဆရာတော်သည် အောက်ပါအတိုင်း မိန့်တော်မူလိုက်လေသည်။
“တပည့်တော်လဲ ဟောကောင်းကောင်းနဲ့ ဟောချလိုက်တာ နှစ်နာရီကျော်သွားတယ်ဘုရား၊ အရှင်ဘုရားရဲ့လူနာ ဒကာမကြီးခါးနာမယ်ဆိုလဲ နာလောက်ပေရာ၏၊”
“တရားရေစက် နာရီဝက် ထို့ထက်ကြာက မုန်းတတ်သည်၊”
Posted by AShin Javana at 8:45 PM0comments
(ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ် တောင်ဦးရွာ တောင်လုံးလှ...
“အင်ရောင်းမျောက်” မိမိတို့၏ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်သည...
“ဓမ္မကထိကအကျော်ဆရာတော်ဦးညေယျနှင့် ဆိုင်းဆရာကြီး စိ...
“ခါးနာရောဂါ စတင်စွဲကပ်လာခြင်း၏ အကြောင်း” သာလွန်ဆရာ...